SBO Ibsa ABO: Jijjiiramni Wareegama Ulfaataadhaan Argame Olola Dharaatiin Hin Gufatu |
Home Afaan Oromoo SBO Ibsa ABO: Jijjiiramni Wareegama Ulfaataadhaan Argame Olola Dharaatiin Hin Gufatu
(SBO/VOL – FULBAANA 21, 2018) — Yeroo ammaa waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti baatii tokko dura irra gahameen lolli gidduu isaanii dhaabbatee, Addi Bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaawuudhaan akeeka polotikaa isaa galmaan gahuuf hojiitti seenee jira. Akka kanaanis Hoogganni ol’aanaan Addichaa Hayyu-Duree isaa Jaal Daawud Ibsaatiin durfamee Fulbaana 15, 2018 handhuura fi magaalaa guddittii Oromiyaa fi Itoophiyaa tan taate magaalaa Finfinnee seenuun ni yaadatama. Simannaa Hooggana ol’aanaa Adda Bilisummaa Oromoo kana irratti ummatni miliyoonota hedduutti lakkaawamu bahee gammachuu isaa ibsachuunis miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa hedduudhaan gabaafamaa ture, gabaafamaas jira. Simannaa guddaa fi seena-qabeessi kunis jaalalaa fi deggersa, akkasumas, abdii ummatni keenya ABO fi kaayyoo isaa irraa qabu bareechee kan mul’isuu dha.
Gama kaaniin sochiin nagaa fi araaraa Mootummaa Itoophiyaa fi humnoota siyaasaa adda addaa gidduutti eegalame kun akka gufatuuf kanneen ifaajan namootni, qaamotnii fi humnootni siyaasaa tokko tokko har’as hin dhabamne. Akka kanaanis guyyoota muraasa dabran kana magaalaa Finfinnee fi bakkoota biroo tokko tokkotti jeequmsa hin feesisne kaasanii ummatoota walitti buusuuf carraaquun mul’atee jira. Gochaan akkasii simannaa Hooggana ABO wajjin wal qabsiifamee raaw’atamuun isaa ammoo qabsoo haqaa Ummatni Oromoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa deebisee gonfachuuf taasisaa jiru alagaa biratti maqaa xureessuuf kan akeekkatame tahuu isaa mallattooleen mul’isan hedduu dha. “Qacceen ofiif dhaanee ofumaaf iyya.” akka jedhamu qaamotni shira kana dalagan gochaa fokkataa isaanii kanaaf ummata Oromootti quba qabuudhaan olola dharaa karaa miidiyaalee fi bifa adda addaan tamsaasaa jiraachuus argaa fi dhagahaa jirra. Qaamotnii fi miidiyaaleen gochaa diigaa akkasii irratti bobba’an hatattamaan gochaa kana irraa akka dhaabbatan mootummaa fi qaamotni dhimmi ilaalu hundi gaafatama isaanii bahachuun barbaachisaa dha.
Previous articleEthiopia has world’s biggest internally displaced population
Next articleOLF and Ethiopia